महोत्सवमा अटोमोबाइल क्रेज
४ आश्विन २०७७, आइतवार | Sep 20, 2020 | 19:53:24
चितवन मेडिकल कलेजमा थप एक संक्रमित महिलाको मृत्यु
नेपालमा आज १० जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु :१ हजार ३ २५ जनामा संक्रमण पुष्टि
By synergyfm on	 January 20, 2020 अर्थ-वाणिज्य, चितवन सेरोफेरो
शिव गौतम ।
नेपाली युवा पिढीँमा पनि पछिल्ला दिन अटोमोबाइलप्रतिको क्रेज बढ्दै गएको देखिन्छ । बजारमा आएका नयाँनयाँ मोडलका गाडीका बारेमा जान्ने इच्छा लगभग अधिकांश युवाहरूमा देखिने गरेको छ । अचेल आयोजना हुने मेला तथा महोत्सवहरूमा विभिन्न वर्गका मानिसलाई लक्षित गर्दै अटोमोबाइल डिलरहरू आफ्नो स्टल राख्ने गरेका छन् । टिकौली चौरमा आयोजना भइरहेको रत्ननगर महोत्सवमा पनि अटोमोबाइल प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । महोत्सवमा बढी चर्चा बटुल्न सफल केही गाडीका मोडलका बारेमा थोरै जानकारी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं । सुरु गरौं कारबाट ः
टक्सन एसयुभी सेग्मेन्टको गाडी हो । टक्सन नेपाली बजारमा टु ह्वील र अल ह्वील गरी दुवै ड्राइभिङ अप्सनमा उपलब्ध छ । पेट्रोल भर्सनको गाडीमा २.० लिटर एमपीआई १९९९ सीसीको इञ्जिन रहेको छ भने डिजेल भर्सनको टक्सनमा २.० लिटरको सिआरडिआई १९९५ सीसी इञ्जिन रहेको छ । पेट्रोल भर्सनको टक्सन ६ स्पीडको म्यानुअल र एटोमेटिक गरी दुई वटै ट्रान्समिसनमा उपलब्ध छ भने डिजेल भर्सनको टक्सनमा आठ स्पीडको म्यानुअल ट्रान्समिसन रहेको छ । पेट्रोल इञ्जिनले अधिकतम १५५ हर्सपावरको शक्ति उत्पादन गर्दा डिजेल इञ्जिनले १७८ हर्सपावर शक्ति उत्पादन गर्छ । टक्सनको इन्धन भण्डारण क्षमता ६२ लिटर रहेको छ भने लगेज क्षमता भेरियन्ट अनुसार ५१९ लिटरसम्मको रहेको छ । गाडीमा छ वटा एयरब्याग, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिङ, पुस बटन स्र्टाट, प्यानारोमा सनरुफ, क्रुज कन्ट्रोल, लगायतका फिचरहरू रहेका छन् । नेपाली बजारमा टक्सन फोर ह्वील र फ्रन्ट ह्वील ड्राइभ गरी दुवै अप्सनमा उपलब्ध छन् । पेट्रोल भर्सनको टक्सनको मूल्य ७४ लाख ९६ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ भने डिजेल भर्सनको टक्सनको मूल्य १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । हुण्डाई कम्पनीका सबै गाडीमा तीन वर्षको वारेन्टी समेत रहेको छ ।
हुण्डाई आइ ट्वाइन्टी एक्टिभ
ह्याचब्याक सेगमेन्टको हुण्डाई आइ ट्वान्टी एक्टिभ नेपाली बजारमा सर्वाधिक रुचाइएको मीड रेन्ज गाडी अन्तर्गत पर्दछ । यो गाडी अहिले पेट्रोल इञ्जिनमा मात्र उपलब्ध छ । चार सिलिण्डरको ११९७ सीसी १.२ लिटर कप्पा डुअल भीटीभीटी पेट्रोल इन्जिनले अधिकतम ८३ हर्सपावरको शक्ति उत्पादन गर्छ । एक्टिभको पेट्रोलका गाडीमा ५ स्पीडको म्यानुअल ट्रान्समिसन रहेको छ भने उसले १७.१९ किमी प्रति लिटरको माइलेज दिने क्षमता राख्दछ । यो गाडीको इन्धन भण्डारण क्षमता ४५ लिटर रहेको छ भने यात्रु क्षमता ५ व्यक्तिको रहेको छ । यो गाडीको लगेज क्षमता २८५ लिटर रहेको छ । यात्रु र चालकको सुरक्षाका लागि यसमा दुईवटा एयरब्याग पनि राखिएका छन् । यस गाडीमा रियर क्यामेरा, पार्किङ सेन्सर, १७.७७ सेन्टिमिटर टचस्क्रिन डिस्प्ले, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर, लगायतका फिचरहरू रहेका छन् । नेपाली बजारमा आइ ट्वान्टी एक्टिभको मूल्य ३८,९६,००० रुपैयाँ रहेको छ ।
हुण्डाईको नेपालमा सर्वाधिक विक्री हुने अर्काे गाडी क्रेटा हो । एसयुभी सेग्मेन्टको यो गाडी नेपाली बजारमा विभिन्न तीन इन्जिनमा पाउन सकिन्छ । इन्जिनका प्रकारहरू १५९१ सीसी १.६ लिटर डुअल भीटीभीटी पेट्रोल, १३९६ सीसी १.४ लिटर युटु सीआरडीआइ डिजेल र १५८२ सीसी १ं.६ लिटर भीटीजी सीआरडीआइ डिजेल रहेका छन् । चारवटा सिलिण्डर भएका यी इन्जिनले क्रमशः १२३, ९० र १२८ हर्सपावरको शक्ति उत्पादन गर्छन् । क्रेटा गाडीका पेट्रोल तथा डिजेल दुवै भेरियान्ट ६ स्पीड अटो तथा म्यानुअल ट्रान्समिसनमा उपलब्ध छन् । यो गाडीको इन्धन भण्डारण क्षमता ५५ लिटर रहेको छ भने यात्रु क्षमता ५ व्यक्ति रहेको छ । यो गाडीको लगेज क्षमता ४७५ लिटर रहेको छ । सनरुफ पनि भएको यो गाडीमा ६ वटा एयर व्याग राखिएका छन् । क्रेटाको पेट्रोल इन्जिनले १६ किमि÷लि माइलेज दिन्छ भने डिजेल गाडीले प्रति लिटर २२ किमि दूरी पार गर्न सक्छ । यो गाडीले हातको नाडीमा बाँध्न मिल्ने स्मार्ट की ब्याण्ड पनि सपोर्ट गर्छ जसका माध्यमले तपाइँ फोन उठाउन, गाडीको ढोका खोल्न र बन्द गर्न, गाडी स्टार्ट र अफ गर्न पनि सक्नुहुन्छ । त्यसका साथै यस गाडीमा इलेक्ट्रिक सनरुफ, रियर पार्किङ सेन्सर, हिलस्टार्ट एसिस्ट कन्ट्रोल, क्रुज कन्ट्रोल, लगायतका सुविधा पनि रहेका छन् । नेपाली बजारमा यो कारको मूल्य रु. ४६ लाख ३६ हजारबाट सुरु हुन्छ ।
थोरै पैसा खर्च गरेर राम्रो फेमेली कार किन्न खोजिरहनुभएको छ भने स्यान्ट्रो कार तपाईका लागि उत्कृष्ट रोजाई हुन सक्छ । सन् १९९८ बाट निर्माण सुरु गरिएको यो ह्याचब्याक सेग्मेन्टको यो कार धेरैको जिन्दगीको पहिलो कार बनेको छ । हुण्डाईले २०१८ मोडलको स्यान्ट्रो कार लन्च गरेसँगै उसले नेपाली बजारमा पनि पुनरागमन जनाएको छ । यो कार नेपाली बजारमा विभिन्न पाँच भेरियन्टमा उपलब्ध छ । सबै भेरियन्टमा शक्तिशाली १०८६ सीसीको १.१ लिटर पेट्रोल इञ्जिन जडान गरिएको छ । यसले अधिकतम ६९ हर्सपावरको शक्ति उत्पादन गर्ने सामथ्र्य राख्दछ । चार सिलिण्डरको उक्त इञ्जिन पाँच स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिसनबाट सञ्चालित छ । गाडीमा इन्धनको भण्डारण क्षमता ३५ लिटर रहेको छ भने लगेज क्षमता २३५ लिटरको रहेको छ । पाँच यात्रु क्षमताको यो कारमा दुईवटा एयरब्याग जडान गरिएको छ । यो कारमा पार्किङ एसिस्ट सिस्टम, चाइल्ड सेफ्टी डुअर लक, एण्टीलक बे्रकिङ सिस्टम, लगायत फिचर रहेका छन् । यो गाडीको नेपाली बजार मूल्य रु. २२ लाख ९६ हजारदेखि सुरु हुन्छ ।
कोना एसयुभी सेग्मेन्टको विद्युतीय गाडी हो । यो गाडी नेपाली बजारमा ३९.२ र ६४ किलोवाट आवर गरी दुइटा ब्याट्री अप्सनमा उपलब्ध छ । गाडीमा रहेको ३९.२ किलोवाट आवर लिथियम आयन पोलिमर ब्याट्रीलाई एक पटक फुल चार्ज गरेपछि गाडीले ३०० किलोमिटर सम्मको दूरी पार गर्न सक्छ । गाडीमा रहेको ब्याट्री एक घण्टा भित्र ८० प्रतिशत चार्ज हुने हुण्डाईको दाबी रहेको छ । कोनामा रहेको विद्युतीय मोटरले १५० किलोवाटको शक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । त्यस्तै, यसले अधिकतम ३९५ न्युटन मिटरको टर्क उत्पादन गर्न सक्छ । अटोमेटिक ट्रान्समिसनबाट सञ्चालित यो गाडीको टप स्पीड १५५ किमि प्रति घण्टा रहेको छ । गाडीमा ३३२ लिटरको लगेज रुम रहेको छ जसलाई १,११४ लिटरसम्म बढाउन मिल्छ । गाडीमा ६ वटा एयरब्याग, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जर, रिभर्स पार्किङ सेन्सर, रियर क्यामेरा, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कन्ट्रोल, लगायत फिचर रहेका छन् । नेपाली बजारमा यो गाडी विभिन्न चार वटा रंगमा उपलब्ध छ । नेपाली बजारमा ३९.२ र ६४ किलोवाट आवर ब्याट्री गरी दुई भेरियन्टमा पाइने कोना गाडीको मूल्य क्रमशः ५५ लाख ९६ हजार र ६५ लाख ९६ हजार रहेको छ । हुण्डाई कम्पनीले गाडीको ब्याट्रीमा ८ वर्ष तथा गाडीमा तीन वर्षको वारेण्टी समेत दिएको छ ।
मारुति सुजुकी भिटेरा ब्रेजा
पछिल्ला समय बढी रूचाइएका एसयुभी सेगमेन्टका गाडीहरूमध्ये एक मारुति सुजुकीको भिटेरा ब्रेजा पनि हो । भिटेरा ब्रेजा हाल नेपालमा डिजेल इन्जिनमा मात्र उपलब्ध छ । यो गाडीमा १२४८ सीसीको ४ सिलिण्डर युक्त डीडीआइएस २०० डिजेल इन्जिन छ जसले ६६ हर्सपावरसम्मको शक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । गाडीमा ४८ लिटरको इन्धन ट्यांकी रहेको छ भने यो गाडीको लगेज क्षमता ३२८ लिटर रहेको छ । पाँच सिटे यो गाडीले अधिकतम २४.३ किमि प्रति लिटरको माइलेज दिन्छ । यो गाडीमा डुअल एयर ब्याग, क्रुज कन्ट्रोल, अटो सिफ्ट गियर जस्ता फिचर रहेका छन् । भिटेरा ब्रेजाको नेपाली बजार मूल्य रु. ३७ लाख ४९ हजारदेखि सुरु हुन्छ ।
मारुति सुजुकी स्वीफ्ट
मारुति सुजुकीको स्वीफ्ट ह्याचब्याक सेगमेन्टको गाडी हो । यो गाडीमा चार सिलिण्डर ११९७ सीसीेको १.२ लिटर भीभीटी पेट्रोल इन्जिन छ जसले ६१ किलोवाटसम्मको शक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । यो गाडी ५ स्पीडको म्यानुअल र अटोमेटिक दुवै ट्रान्समिसनबाट सञ्चालित छ । गाडीमा ३७ लिटरको इन्धन ट्यांकी रहेको छ भने गाडीको लगेज क्षमता २६८ लिटर रहेको छ । पाँच सिटे यो गाडीले अधिकतम २२ किमि प्रति लिटरको माइलेज दिन्छ । यो गाडीमा स्मार्ट प्ले इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम, पुस स्टार्ट स्टप बटन, स्मार्ट की, एबीएस, फ्रन्ट डुअल एयरब्याग, जस्ता फिचर रहेका छन् । नेपाली बजारमा यो कार विभिन्न दुई भेरियन्टमा उपलब्ध छ । नेपाली बजारमा स्वीफ्ट कारको मूल्य रु. २९ लाख ४९ हजारदेखि सुरु हुन्छ ।
भारतीय ब्राण्ड टाटाको नेक्सन एसयुभी सेगमेन्टको गाडी हो । यो गाडी तीन सिलिण्डर अन्तर्गत ११९८ सीसीेको १.२ लिटर रेभोट्रोन पेट्रोल र १.२ लिटरकै रेभोटर्क डिजेल इन्जिनमा उपलब्ध छ जसले ११० हर्सपावरसम्मको शक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । यो गाडी ६ स्पीडको म्यानुअल ट्रान्समिसनले सञ्चालन हुन्छ । गाडीमा ४४ लिटरको इन्धन ट्यांकी रहेको छ भने यो गाडीको लगेज क्षमता ३५० लिटर रहेको छ । पाँच सिटे यो गाडीले पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः १७ र २१ किमि प्रति लिटरको माइलेज दिन्छ । यो गाडीमा डुअल एयर ब्याग, टच स्क्रीन नेभिगेसन प्यानल, लगायतका फिचर रहेका छन् । नेक्सनको नेपाली बजार मूल्य रु. ३२ लाख ७५ हजारदेखि सुरु हुन्छ ।
टाटाको टिगोर सेडान सेगमेन्टको गाडी हो । यो गाडी तीन सिलिण्डर अन्तर्गत ११९९ सीसीेको १.२ लिटर रेभोट्रोन पेट्रोल इन्जिनमा उपलब्ध छ जसले ८५ हर्सपावरसम्मको शक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । यो गाडी ५ स्पीडको म्यानुअल ट्रान्समिसनले सञ्चालन हुन्छ । गाडीमा ३५ लिटरको इन्धन ट्यांकी रहेको छ भने यो गाडीको लगेज क्षमता ४१९ लिटर रहेको छ । पाँच सिटे यो गाडीले १८ किमि प्रति लिटरको माइलेज दिन्छ । यो गाडीमा डुअल एयर ब्याग, फ्रन्ट डिस्क ब्रेक लगायत फिचर रहेका छन् । नेक्सनको नेपाली बजार मूल्य रु.२३ लाख २५ हजारदेखि सुरु हुन्छ ।
नेपालमा सर्वाधिक रूचाइएको एसयुभी सेग्मेन्टको गाडीमा स्कोर्पियो पनि पर्दछ । नेपाली बजारमा स्कोर्पियो विभिन्न चार वटा भेरियन्टमा उपलब्ध छ । यसमा २१७९ सीसीको शक्तिशाली एमह्वक चार सिलिण्डर डिजेल इञ्जिन रहेको छ जसले अधिकतम १२० हर्सपावरको शक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । गाडी पाँच स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिसनबाट सञ्चालित छ । स्कोर्पियो टु ह्वील र अल ह्वील ड्राइभ दुवैमा उपलब्ध छ । फोर ह्वील ड्राइभ भएकै कारण पनि यो गाडीलाई अफ रोड ड्राइभका लागि बढी उपयुक्त मान्ने गरिन्छ । इन्धन भण्डारण क्षमता ६० लिटर रहेको यो गाडीले प्रति लिटर १५ किलोमिटरको माइलेज दिने गरेको छ । यो गाडीमा लगेज क्षमता ४६० लिटरको रहेको छ । स्कोर्पियो गाडीमा क्रुज कन्ट्रोल, रेन एण्ड लाइट सेन्सर, डुअल फ्रन्ट एयरब्याग, अटो विन्डो रोल अप, लगायतका फिचर रहेका छन् । नेपाली बजारमा यो गाडी विभिन्न चार रंगमा उपलब्ध छ । नेपाली बजारमा स्कोर्पियोको बजार मूल्य ३५ लाख ७५ हजार रुपैँयाबाट सुरु हुने गरेको छ ।
एक्सयुभी गाडी एसयुभी सेग्मेन्टको गाडी हो । नेपाली बजारमा यो गाडी विभिन्न चार वटा भेरियन्टमा उपलब्ध छ । एक्सयुभीको डिजेल इञ्जिन १४९७ सीसीको रहेको छ भने पेट्रोल इञ्जिन ११९७ सीसीको रहेको छ । पेट्रोल इञ्जिनले अधिकतम ११० हर्सपावरको शक्ति उत्पादन गर्छ भने डिजेल इञ्जिनले ११५ हर्सपावरको शक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । गाडी छ स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिसनबाट सञ्चालित छ । इन्धन भण्डारण क्षमता ४२ लिटर रहेको यो गाडीको पेट्रोल भेरियन्टले १७ किमि प्रति लिटरको माइलेज दिन्छ भने डिजेल भेरियन्टको माइलेज २० किमि प्रति लिटर रहेको छ । यो गाडीमा लगेज क्षमता २५९ लिटरको रहेको छ । यो गाडीमा सात वटा एयरब्याग रहेका छन् जुन एसयुभी सेग्मेन्टमै पहिलो भएको महिन्द्राको दाबी छ । त्यसका अलावा गाडीमा क्रुज कन्ट्रोल, एबीएस, १७.७८ सेन्टिमिटर टचस्क्रीन इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम, स्पीड सेन्सीङ डुवर लक, लगायतका फिचर रहेका छन् । नेपाली बजारमा यो गाडी विभिन्न ६ रंगमा उपलब्ध छ । नेपाली बजारमा यस गाडीको मूल्य ४१ लाख २५ हजार रुपैँयादेखि सुरु हुन्छ ।
दी गो इभी८
इभी८ विद्युतीय गाडी हो । यो गाडीमा १४.८ किलोवाट आवर क्षमता भएको लिथियम आयन फोस्फोरस ब्याट्री जडान गरिएको छ । फुल चार्ज गरिएको ब्याट्रीको सहायताले यो गाडीले एक पटकमा १५० किलोमिटरसम्मको दूरी पार गर्न सक्छ । यो गाडीको टप स्पीड ७० किमि प्रति घण्टा रहेको छ । यो गाडीमा रहेको ब्याट्रीलाई फुल चार्ज गर्न पाँचदेखि छ घण्टाको समय लाग्ने बताइएको छ । नेपाली बजारमा दी गो इभी८ गाडीको मूल्य १८ लाख ९५ हजार रहेको छ ।
एउटा सामान्य नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्ने मोटरसाइकल १५० सीसी सेग्मेण्ट भित्र पर्ने गर्छ । बजारमा आएका हरेक नयाँ कुरासँग अभ्यस्त हुन चाहने बानीले गर्दा नयाँ पुस्ता महँगा मोटरसाइकलतर्फ पनि आकर्षित हुन थालेका छन् । फलस्वरूप महोत्सवमा पनि तिनै महँगा बाइकले ठाउँ लिएको पाइयो ।
बी.एम.डब्लु. जी ३१० आर
लक्जरीयस कार निर्माण गर्दै आएको जर्मन कम्पनी बी.एम.डब्लु.ले मोटरसाइकल पनि बनाउने गरेको छ । बीएमडब्लु जी ३१० आरमा ३१३ सीसीको लिक्वीड कुल्ड सिंगल सिलिण्डर इञ्जिन रहेको छ । यो बाइकले ९५०० आरपीएममा ३४ हर्सपावरको शक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । यसमा ११ लिटरको फ्युल ट्याङ्क रहेको छ । न्याकेड बाइक जी ३१० आरले ३०.३ किमि प्रति लिटरसम्मको माइलेज दिने गरेको छ । बाइकमा एबीएस, ६ स्पीडको गीयरबक्स, मोनोक्रस सस्पेन्सन, लगायतका फिचर रहेका छन् । नेपाली बजारमा यो बाइक पर्ल ह्वाइट मेटालिक, कस्मिक ब्ल्याक र रेसिङ रेड गरी तीन रंगमा उपलब्ध छ जसको मूल्य क्रमशः ९ लाख ७५ हजार, ९ लाख ५० हजार र १० लाख ९० हजार रहेको छ । बाइकमा तीन वर्षको वारेण्टी पनि रहेको छ ।
मोटरहेड टेक्कान २५०
मोडरहेड टेक्कान २५० चीनमा निर्मित क्रसओभर अर्थात् डर्ट बाइक हो । यो बाइकमा २२३ सीसीको ४ स्ट्रोक ओइल कुल्ड लोंकिन आरई२५० इञ्जिन रहेको छ । यो बाइकले अधिकतम १६ हर्सपावरको शक्ति तथा १७ न्युटन मिटरको टर्क उत्पादन गर्न सक्छ । बाइकमा १४ लिटरको इन्धन भण्डारण क्षमता रहेको छ भने यो बाइकले ४० किमि प्रति लिटरसम्मको माइलेज दिन सक्छ । बाइकमा डबल एक्जस्ट पाइप, युएसबी चार्जर, डिजिटल स्पीडोमिटर, लगायतका फिचर रहेका छन् । नेपाली बजारमा यस बाइकको मूल्य ३ लाख पचास हजार रहेको छ ।
सीएफमोटो १५० एनके
सीएफमोटो कम्पनीका मोटरसाइकल हालसालै मात्रै चितवन भित्रिएका हुन् । न्याकेड सेग्मेन्टको १५० एनके मोटरसाइकलमा १४९.४ सीसीको लिक्वीड कुल्ड सिंगल सिलिण्डर इञ्जिन रहेको छ । यो बाइकले अधिकतम १०.७ हर्सपावरसम्मको शक्ति उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ । त्यसैगरी यसले १२.२ न्युटन मिटरको टर्क उत्पादन गर्न सक्छ । यो बाइको दुवै पांग्रामा डिस्क बे्रक जडान गरिएको छ । यो बाइकमा फ्युल ट्याङ्क भने १० लिटरको रहेको छ । ६ स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिसनबाट चल्ने यो बाइकले ३० किमि प्रति लिटरसम्मको माइलेज दिन सक्छ । नेपाली बजारमा यो बाइकको मूल्य ३ लाख २१ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने गरेको छ ।
सीएफमोटो २५० एनके
२५० एनके मोटरसाइकलमा २४९.२ सीसीको लिक्वीड कुल्ड सिंगल सिलिण्डर डीओएचसी इञ्जिन रहेको छ । यो बाइकले अधिकतम १९.५ हर्सपावरसम्मको शक्ति उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ । त्यसैगरी यसले २२ न्युटन मिटरको टर्क उत्पादन गर्न सक्छ । बाइका दुवै पांग्रा डिस्क बे्रकिङ सिस्टमबाट सञ्चालित छन् । बाइकमा एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टमको पनि सुविधा रहेको छ । यो बाइकमा फ्युल ट्याङ्क भने १२.५ लिटरको रहेको छ । ६ स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिसनबाट चल्ने यो बाइकले ३३ किमि प्रति लिटरसम्मको माइलेज दिन सक्छ । नेपाली बजारमा यो बाइकको मूल्य ५ लाख २५ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने गरेको छ ।
सीएफमोटो ४०० एनके
न्याकेड सेग्मेन्टको ४०० एनके मोटरसाइकलमा ४०० सीसीको लिक्वीड कुल्ड डबल सिलिण्डर इञ्जिन रहेको छ । यो बाइकले अधिकतम ४२ हर्सपावरसम्मको शक्ति उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ । त्यसैगरी यसले ३५.४ न्युटन मिटरको टर्क उत्पादन गर्न सक्छ । यो बाइकका दुवै पांग्रामा डिस्क बे्रक जडान गरिएको छ । यो बाइकमा फ्युल ट्याङ्क भने १७ लिटरको रहेको छ । ६ स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिसनबाट चल्ने यो बाइकले २७ किमि प्रति लिटरसम्मको माइलेज दिन सक्छ । नेपाली बजारमा यो बाइकको मूल्य ७ लाख ९० हजार रुपैयाँ पर्दछ ।
सीएफमोटो ४०० जीटी
स्पोर्टस् सेग्मेन्टको ४०० जीटी मोटरसाइकलमा ४०० सीसीको लिक्वीड कुल्ड डबल सिलिण्डर डिओएचसी इञ्जिन रहेको छ । यो बाइकले अधिकतम ४२ हर्सपावरसम्मको शक्ति उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ । त्यसैगरी यसले ३५ न्युटन मिटरको टर्क उत्पादन गर्न सक्छ । यो बाइकमा डिस्क बे्रकका साथसाथै एबीएसको सुविधा पनि रहेको छ । यो बाइकमा फ्युल ट्याङ्क भने १९ लिटरको रहेको छ । ६ स्पीड म्यानुअल ट्रान्समिसनबाट चल्ने यो बाइकको नेपाली बजार मूल्य ९ लाख ४१ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ ।